မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] - Page 8
351 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 24th February 2010, 8:14 am
ကို 22 ကတော့နောက်ပြီ
(၂)ပတ်လောက်နေမှ introduction ကိုတွေ့ တယ်ဆိုပဲ (ကျနော်စ၀င်တုန်းကလဲ ဒီလိုပဲလို့ .အဟီး.)
အစ်ကိုသိထားတာလေးတွေ မျှဝေပေးနေတာတွေ့ ရပါတယ်ဗျာ.
နောက်လဲ ကူညီပါဦးလို့ 
352 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 24th February 2010, 7:26 pm
ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဗြန်ပြောင်း ဗြောင်းပြန်လုပ်ထားတာလေ။
နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ နာမည်လေးတော့ မြင်ဖူးနေသလိုလိုဘဲ။
353 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 24th February 2010, 8:46 pm
354 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th February 2010, 9:29 pm
တညျနရော : 230, Lattamar street, Shwe Gu quarter,Pyay,Myanmar.
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-02-25
how are you 22?
355 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 2nd March 2010, 9:31 pm
Thaw zin htun
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-03-02
ကျွန်တော်ကတော့ သော်ဇင်ထွန်းပါ ဘာမှမတတ်ပါဘူး ။ ပွားပဲ ပွားတတ်တယ်။ ဝေဖန်ရေးကိုပြောတာပါ။ ကောင်မလေးတွေကလည်း အရမ်း စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ အမေ့စကားကို နားထောင်တော့ ခုထိတော့ အိမ်ထောင်
မပြုရသေးကြောင်းပါ။ တတ်နိင်သလောက်ကြိုးစားပါ့မယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်ဗျာ။ ကဲ လာ လရော့ ..........
ဟယ်.............ငါလာပြီကွ ဘူမှ အားငယ်ကြနဲ့ ငါ့လေ နဲ့ ကာကွယ်ထားပေးမယ် ဟီး။ :shout
အော်မေ့လို့ ခင်မင်သူများ ၀က်ကလေးလို့ခေါ်နိင်ပါတယ်ခင်များ။
356 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 3rd March 2010, 4:14 pm
ခုလိုလာရောက်တာ ၀မ်းသာပါတယ်၊နောက်လဲ လာခဲ့ပါနော်၊ဖိုရမ်အတွက် အကျိုးပြုပိုစ်တွေတင်ပေးပါအုံး
ကိုဝက်က ကျွမ်းပါတယ်၊ကိုဝက် ကျန်းမာချမ်းသာလန်းဖြာပါစေကြောင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်
357 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 4th March 2010, 2:20 pm
ဖူးဖူးမှုတ်ထားပေးမယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။(စတာနော် ချိတ်ချိုးနဲ့)
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ်သိတာလေးတွေကို ဝေမျှဖို့လဲ တောင်းဆိုပါတယ်။
ဒါနဲ့ .... ကောင်မလေးတွေက ဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲတိပူးနော် :shout
358 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 4th March 2010, 9:44 pm
အားလုံးကို ကျနော်လည်း ၀င်ရောက်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော် ..
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ကြပါစေဗျာ ..
359 မင်္ဂလာပါ on 12th March 2010, 4:32 pm
အားလုံးမင်္ဂလာပါ ဗျာ it လောကကို အခုမှဝင်လာတာပါ computer ပတ်သက်ရင် အားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် myanmaritresources ကို အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
မသိတာတွေ အားလုံးကို မေးသွားမယ့် lwenay ပါ ခင်ကြပါနော်
360 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th March 2010, 6:40 pm
lwenay wrote: အားလုံးမင်္ဂလာပါ ဗျာ it လောကကို အခုမှဝင်လာတာပါ computer ပတ်သက်ရင် အားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် myanmaritresources ကို အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
မင်္ဂလာပါ ကို lwenay ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ
မသိတာရှိလည်း မေးနိုင်ပါတယ် .. သိတာများ ရှိမယ်ဆိုလည်း ပို့စ်တွေတင်ပါဦးလို့
361 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th March 2010, 7:33 pm
ခင်ပါတယ်ဗျာ အမြဲတမ်းလည်းကြိုဆိုပါတယ် ၀င်ပါထွက်ပါ လို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ
အဲကျန်သေးတယ် ရေးသားပါ ဟီး
362 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th March 2010, 7:35 pm
နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါ၏ ခင်ဗျာ
ဖိုရမ် သုံးရတာ အဆင်ပြေပါစေ [You must be registered and logged in to see this image.]
363 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th March 2010, 8:08 pm
nice to meet you here brother(s)
glad to be M.I.T.R member
364 မန်ဘာများနှုတ်ဆက်ခန်း on 13th March 2010, 10:01 am
မင်္ဂလာပါ Neo ပါခင်ဗျာ
365 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th March 2010, 10:18 am
Welcome bro Neo.
366 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th March 2010, 10:26 am
ဒါပေမယ့် အတိတ်ကိုတွေး မဆွေးပါနဲ့ကွယ်
တော့ပစ်ချော်နေပါသည် ။ နောက်ကို ပို့စ်တင်ရင် တော့ပစ်ကိုသေချာကြည့်ပြီးပို့စ်တင်ပေးပါ ။
တစ်ရက်ကို ဒီအတိုင်းထားပါမယ် ။ နောက်ရက်တွင် နေရာပြောင်းပါမယ် ။
Last edited by samurai on 13th March 2010, 11:34 am; edited2times in total
367 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th March 2010, 10:27 am
368 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th March 2010, 10:32 am
မင်းက ငါ့ထက်အသက်ငယ်ပေမယ့် တော်တယ်ကွာ
ငါလည်း ကျွမ်းကျင်ချင်တယ် ဒါပေမယ့်....... ပေါ့ကွာ
369 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th March 2010, 10:35 am
ကျွန်တော်က ဘာမှမသိပါဘူးဗျာ....ကျွန်တော့် နောင်တော် $ƴǩǾ ကမှ တစ်ကယ်တော်တာ ကျွန်တော်က အခုမှ Beginner ပဲရှိသေးတာပါ
370 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th March 2010, 10:44 am
ဟုတ်ပါပြီကွာ ကြိုးစားကွာ အနည်းဆုံးတော့ ဘဏ်လေးဘာလေး hack နိုင်တဲ့ အထိ
ဟေ့ကောင်ဟေ့ကောင် နောက်တာနော် ငါ မပါဘူး
371 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th March 2010, 10:50 am
နာမည်လေးတော့ တပ်မယ်လေ... Hack by N30 လို့ Just kidding
372 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th March 2010, 10:52 am
မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ကွာ မိန်းမလေးတော့ ယူပါရစေဥိး
373 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th March 2010, 10:56 am
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ....ကို Neo ကတော့ မိတ်ဆက်မှာတင် လူပြို ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာသွားပါတယ်...
374 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th March 2010, 11:05 am
မင်းဒီလို ပြောပေးတော့ ငါ့မှာ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ရ သလိုပါပဲ
ကြုံတိုင်းလည်း ကြော်ငြာပေးပါကွာ နော်
375 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th March 2010, 11:09 am
မင်္ဂလာပါ ကို NEO
ကျနော်လည်း ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ .. ပျော်ရွှင်ပါစေ
376 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th March 2010, 11:14 am
မင်္ဂလာပါ ကို N@Y Y!N3
တယောက်တည်း ဆိုတော့မကြောက်ပေမယ့် မပျင်းဘူးလားဗျာ
377 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th March 2010, 4:01 pm
တညျနရော : မြေနီကုန်း
378 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th March 2010, 4:09 pm
379 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th March 2010, 5:23 pm
380 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th March 2010, 7:41 pm
ဟုတ်ကဲ့။ Gangster Crazy ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတဲ့ RPG Game တစ်ခုကို ၀ါသနာပါမှာပါ။
BETA အဆင့်က ကျော်လာရင် အစ်ကို့ကို အသိပေးမယ်လေ။
381 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 19th March 2010, 6:59 am
ကျွန်တော့်နာမည်ဥာဏ်လင်းထက်ပါ..........အသက်ကလက်၇ှိမှာ 19 မပြည့်သေးပါဘူး......
ပဲခူးသားပါ.........သစ်တောတက္ကသိုလ်ကို ပထမနှစ်အောင်ပြီး ဆက်မတက်တော့ဘဲ ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့
ထိုင်းနိုင် ငံကိုရောက်နေပါတယ်.........အသဲခဏခဏကွဲပြီး ပိုက်ဆံအဲဗားပြတ်ပါတယ်..............
ကွန်ပြူတာကို လက်ရှိအချိန်မှာ ရည်းစားလိုချစ်ပါတယ်(ရည်းစားမရှိသေးလို့)
ပိုစ့်ရေးရမှာ အလွန်ပျင်းပါတယ်......ဒေါင်းလုပ်အသေဆွဲပါတယ်............ခင်တဲ့လူမှန်သမျှကို ဘီယာတိုက်ခိုင်းတတ်ပါ
382 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 19th March 2010, 10:11 am
ရည်းစားမြန်မြန်ထားလိုက်လေ(ပီးရင် ကွန်ပျူတာကို အနော့်ကိုပေးနော်)
တော်သေးဒယ် သူက ယားဒယိုးမှာမို့လို့
ဖိုရမ်မှာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အကျိုးပြုပို့စ်တွေ များများတင်နိုင်ပါစေဗျာ။
383 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 19th March 2010, 10:39 am
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 20
ကျွန်တော် ကတော့ vostro ပါ
အားလုံး ကို လေးစားပါတယ်
384 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 19th March 2010, 12:24 pm
မင်္ဂလာပါ ကို vostro ရေ။
MITR နဲ့ အကျိုးပြုပို့စ်တွေရေးရင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
385 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 19th March 2010, 2:12 pm
$ƴǩǾ wrote: ဟုတ်ကဲ့။ Gangster Crazy ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတဲ့ RPG Game တစ်ခုကို ၀ါသနာပါမှာပါ။
ဘီတာ အဆင့်ကျော်ရင်မောင်းတီးပေးအုန်းနော်အကိုး)
386 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 19th March 2010, 4:30 pm
gcrazy wrote: ဟုတ်ကဲ့ပါအကို.......
ဟိုက်။ ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပါလား။ တားတား ဘာမှလုပ်ရတေးဘူးနော်။ တား ကောင်မယေး ကလွဲရင် ဘယ်တု့ကိုမှ လက်ဖျားနဲ့တောင် တို့ရတေးဝူး။
gcrazy wrote: ဘီတာ အဆင့်ကျော်ရင်မောင်းတီးပေးအုန်းနော်အကိုး)
BETA အဆင့်ကျော်ရင် Forum Project Listing ထဲမှာကို ထည့်ပြီးတော့ ထားမှာပါဗျာ။
တခြား Project တွေလည်းရှိသေးတယ်။ လုပ်ချင်တာတွေ တအားများတော့ အရင်ကဆို ၀ုန်းဒိုင်းလျှောက်လုပ်တာ ၊ ပြီးတော့ဘာမှလည်း ရေရေရာရာ မပြီးဘူး။ အခုတော့ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့ တစ်တောင်ချင်း ဖြိုမယ် စိတ်ကူးထားတယ်။
387 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th March 2010, 1:40 pm
မန်ဘာအသစ်များ အားလုံးကို MITR အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုယ်စား
ကျွန်တော်ဆာမူရိုင်းမှ ကြိုဆိုပါသည် ။ ဖိုရမ်အတွင်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါသည် ။
မသိတာများကို မေးနိုင်ပြီး ၊ သိတာများကိုလည်း ပြန်လည်ဝေမျှရင်း ကျွန်တော်တို့ MITR ဖိုရမ်ကြီး အောင်မြင်
သထက်အောင်မြင်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီကျပါလို့ ....................
ဖိုရမ်အတွင်း အခက်အခဲများရှိပါကလည်း ကျွန်တော်တိုိ့ကို PM ပို့စ်ပြီးမေးနိုင်ပါသည် ။
388 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th March 2010, 1:58 pm
မန်ဘာတွေနှုတ်ဆက်ခန်းနေရာမှာ ကျနော်ဝင်ရေးတာမရှိလို့ ကျနော့်ကို မခင်တတ်ဘူးလို့ မထင်ပါနဲ့နော်.. ကျနော်က တကယ့်ကို သဘောကောင်းပြီး ခင်တာမှ ပက်ပက်စက်စက်ကို ခင်တတ်ပါတယ်ဗျာ... တစ်ယောက်ချင်းစီတော့လိုက်မနှုတ်ဆက်တော့ဘူးနော်... မန်ဘာဝင်များ အားလုံးပဲ ကျနော် mars ကကြိုဆိုပါတယ်လို့ ... (mars = ခြင်ဆေးခွေမဟုတ်ပါ )
389 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st March 2010, 12:42 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-03-21
မင်္ဂလာပါ ခင် ဗျာ
390 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st March 2010, 1:20 pm
ကို Nay မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ
ကျနော်တို့ MITR မှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်
391 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 23rd March 2010, 1:30 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-03-22
[You must be registered and logged in to see this image.] ကျနော်လည်းအခုမှစ၀င်တဲ့မန်ဘာအသစ်တစ်ယောက်ပါ နာမည်က `ဖိုးသားလေး´ပါ။ နည်းပညာတွေကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်ကူညီကြပါလို့ တောင်ဆိုပါတယ်
ပြီးတော့ဖိုရမ်ကိုအကောင်းဆိုးမလုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့်တစ်စိတ်တစ်ဒေသကူညီဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ ဖိုရမ်ရှိမန်ဘာလားလုံးကိုတားတားက `မင်္ဂလာပါ ကျနော်ကိုလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်ခင်ပေးကြပါလို့ ´ တောင်းဆိုပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
392 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 23rd March 2010, 2:29 pm
ကိုဖိုးသားလေး ကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ... ၀ါသနာတူလို့ ဒီကိုရောက်လာကြတဲ့သူတတွေချည်းပါပဲ ... အားလုံး က မိတ်ဆွေတွေပါပဲ ... ဖိုရမ်မှာလည်း ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ .. သိထားတာကလေးတွေကိုလည်း ပြန်လည်မျှဝေစေချင်ပါတယ် ဗျာ ...
393 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 23rd March 2010, 4:19 pm
photharlay မင်္ဂလာပါဗျာ ။
MIRT ဖိုရမ်မှ အကို ကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ် အကို ။ အခက်အခဲရှိရင်လည်း
ပြောပါ အားလုံးက ၀ိုင်းရှင်းပေးပါလိမ့်မယ် ။ ဖိုရမ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။
394 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 23rd March 2010, 10:29 pm
ကျနော်လည်း မန်ဘာတွေကို လာရောက်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာ
အသင်းဝင်များအားလုံး MITR မှာ
395 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th March 2010, 7:17 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-03-26
ကျွန်မကွန်ပျူတာကိုစိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာနေတဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မကိုအားလုံးဝိုင်းပြီးကူညီပေးကြပါ။
396 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th March 2010, 7:58 am
မသိတာရှိရင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မေးနိုင်ပါတယ်........
ဖိုရမ် မှ သိတဲ့သူများက ၀င်ရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်။
သိထားတာလေးတွေကိုလဲ ဝေမျှပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
397 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th March 2010, 8:51 am
ကွန်ပျူတာပဲလား.... အဟီး(စတာနော် အတည်)
ဖိုရမ်မှာ လေ့လာရင်း ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။..
398 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 26th March 2010, 1:44 pm
တညျနရော : လောကဧ။် တဖက်ကမ်း
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 22
ko moeyake တို့ ကတော့ နော် ပြော ကို မပြော ချင်ဘူး..ဟီဟီး
399 Virus ပါ on 4th April 2010, 7:09 pm
Virus ပါ ကိုက်တတ်ပါတယ် ပြေးကြပါ အလကား စတာ အနားကိုလာကြ အဟီး သင်ပေးကြနော် တစ်ယောက်နည်းနည်း စီပေါ့ တားက ဘာမှ တိဖူးဗျ
400 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 4th April 2010, 7:49 pm
MITR မှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ၏။
Admin တွေစာမေးပွဲပြီးရင် လဲကြိုဆိုပါလိမ့်မယ်။
401 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 4th April 2010, 8:56 pm
M I T R Virus ၀င်နေပါသည် Just kidding welcome form our forum bro.
402 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting]
Forumotion.com | Computers and Internet | Useful tricks and tips, infos | © PunBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Free forum